Home Wararka Maxaa ka soo baxay kulankii RW Rooble iyo qayska Ikraan Tahliil
Maxaa ka soo baxay kulankii RW Rooble iyo qayska Ikraan Tahliil
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta la kulmay qoyska Ikraan Tahliil Faarax iyo xubno ay ku jiraan odayaal dhaqan. Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay in ay ka go’an tahay in qoyska Ikraan ay helaan caddaalad, isla markaana uu qaadi doono tallaabooyin laga maarmaan ah, si uu u xaqiijiyo arrintaas.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo siidaayo dadka aan waxba galabsan ee ku afduuban magaalada Beledweyne. Kulanka oo ahaa mid ku yimid cadaadis la saaray Rooble in uu talaab adag ka qaado Fahad Yasin oo loo hasyto in uu ka danbeeyay dilka gabadhaas.
War ka soo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa lagu yiri “Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta la kulmay qoyska Ikraan Tahliil Faarax oo ay wehliyaan Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Cabdullaahi iyo xubno ka tirsan ehelada Ikraan isagoo la wadaagay dareenkiisa iyo sida uu uga xun yahay dhibka ku dhacay gabadooda”.
“Ra’iisul Wasaaraha ayaa mar kale u xaqiijiyay qoyska Ikraan sida ay uga go’an tahay ay helaan caddaalad, uuna qaadi doono tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si arrintaas loo xaqiijiyo, waxa uuna ku baaqay in si degdeg ah loo siidaayo dadka aan waxba galabsan ee la afduubtay” ayaa la sii raaciyay.
Dad badan yaa rumeysan in RW Rooble lumiyay fursad uu ku hanan karay taageerada Shacabka taas oo ahayd in uu ka taqaluso Fahad Yasin, lakiin waxa muuqata in uusan wali ku dhiiran karin ceyrinta Milkiilaha dowlada Farmaajo.